» को पुग्ला उत्कृष्ट ४ मा ? यस्तो छ सम्भावना
को पुग्ला उत्कृष्ट ४ मा ? यस्तो छ सम्भावना
१ माघ २०७७, बिहीबार ०८:४८
मकवानपुर, १ माघ । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ मा यो साता उत्कृष्ट ४ प्रतियोगीहरु छानिदैछन् । उत्कृष्ट ५ मा परेका लक्ष्मण लिम्बु, सुरेश लामा, एलिना गुरुङ, सन्देश बम्जन लामा र अमिन परियारमध्ये एकजनाले यो साता शो छाड्नेछन् । यी ५ प्रतियोगीहरु सबै उत्कृष्ट ४ का दाबेदारहरु हुन् । तर हालसम्म प्राप्त अवार्ड र बटम थ्रीमा परेका आधारमा उनीहरुमध्ये केही प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ४ मा पुग्नसक्ने सम्भावना फरक फरक रहेको छ । यस भिडियो सामग्रीमा नेपाल स्टारका उत्कृष्ट ५ प्रतियोगीहरुमध्ये उनीहरुले अहिलेसम्म पाएका अवार्डका आधारमा,उनीहरु अहिलेसम्म बटम लाईन पुगेका आधारमा र प्रस्तुतिहरुका आधारमा को को उत्कृष्ट ४ मा पुग्लान् र कसलाई खतरा छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ । तपाईको विचारमा उत्कृष्ट ४ भित्र को को पुग्छन् जस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
नेपाल स्टारको उत्कृष्ट ५ मा पुगेका प्रतियोगीहरुमध्ये उत्कृष्ट १० देखि उत्कृष्ट ५ सम्म आईपुग्दा एपटक पनि बटम लाईनमा नपरेका प्रतियोगीहरु लक्ष्मण लिम्बु र एलिना गुरुङ हुन् । उनीहरुले अहिलेसम्म एकपटक पनि बटम थ्रीको सामना गरेका छैनन् । उनीहरु शोकै सबैभन्दा सुरक्षित प्रतियोगीहरु हुन् । त्यस्तै सुरेश लामा र सन्देश बम्जन लामाले १–१ पटक र अमिन परियारले ३ पटब बटम थ्रीको सामना गरेका छन् । बटम थ्रीमा परेका हिसाबले सबैभन्दा सुरक्षित लक्ष्मण र एलिना, केही कम सुरक्षित सुरेश र सन्देश तथा सबैभन्दा जोखिममा अमिन रहेका छन् । अमिनले उत्कृष्ट ७ छनौटका क्रममा, उत्कृष्ट ६ छनौटका क्रममा र उत्कृष्ट ५ छनौटका क्रममा गरी ३ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका थिए । सन्देशले उत्कृष्ट ५ छनौटका क्रममा र सुरेशले उत्कृष्ट ६ छनौटका क्रममा बटम थ्रीको सामना गरेका थिए ।
नेपाल स्टारमा हालसम्म प्राप्त अवार्डहरुका आधारमा सबैभन्दा बलियो प्रतियोगी अमिन परियार हुन् । उनले हालसम्म २ वटा अवार्ड जितिसकेका छन् । शोमा दुई वटा अवार्ड जित्ने हालसम्मका उनी एकमात्र प्रतियोगी हुन् । उत्कृष्ट ५ मा पुगेका अन्य प्रतियोगीहरुले केबल १–१ वटामात्र अवार्ड जितेका छन् । उनीहरुमध्ये लक्ष्मणले उत्कृष्ट ७ छनौटका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । सुरेशले उत्कृष्ट ७ को छनौटका क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड र एलिनाले उत्कृष्ट ५ छनौटको क्रममा पहिलो पटक पफोमर अफ द डे अवार्ड पनि जितेकी थिईन् । एलिना नै नेपाल स्टारमा अवार्ड जित्ने पहिलो महिला प्रतियोगी पनि हुन् । त्यस्तै सन्देशले उत्कृष्ट ८ छनौटको क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड तथा अमिनले उत्कृष्ट ५ छनौटका क्रममा एक्स्पर्ट अफ द डे अवार्ड र उत्कृष्ट ६ को छनौटका क्रममा पहिलो पटक पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए ।